Paris Saint-Germain oo doonaysa inay Georginio Wijnaldum ka afduubato Kooxda Barcelona – Gool FM
(Paris) 05 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee ka dhisan caasimadda Faransiiska ayaa la soo warinayaa inay ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga xulka qaranka Holland ee Georginio Wijnaldum, isla markaana ay ku garaacdo Barcelona.
Tababare Ronald Koeman ayaa arki kara in mid ka mid ah bartilmaameedyadiisii ​​xagaaga ee ugu weynaa uu u xuub-siibto dhinaca PSG, iyadoo kooxda reer France ay isku dayayso inay hesho adeeggiisa.
Shabakadda ciyaaraha ee ESPN ayaa warinaya in kooxda Faransiiska ay miidka saartay dalab aan u fududeyn Kooxda Barcelona.
Barcelona ayaa isku dayday inay lasoo saxiixato xiddiga Liverpool suuqii ugu danbeeyay, waxaana ay doonayaan inay si bilaash ah ku keensadaan sanadkan.
Kaddib markii kooxda reer Spain ay la soo saxiixatay Sergio Aguero iyo Eric Garcia, naadiga Catalan ayaa raadinaysay inay Wijnaldum keento garoonka Camp Nou, weliba heshiis la jaan qaadaya xaaladda dhaqaale ee adag oo ay kooxda ku sugan tahay, laakiin haatan waxa ay u muuqataa inay tartan adag oo ku aaddan saxiixa xiddigan kala kulmayaan PSG.
Laacibkan khadka dhexe ayaa haatan ku jira xiddiga xulka qaranka Netherlands ee ka qeyb galaya tartanka qarammada qaaradda Yurub ee dhowaan bilaaban doona.
Xiddig ay doonaysay inay la saxiixato Kooxda Manchester United oo Guri ka raadsanaya dalka Ingiriiska